2008: Afọ nke Micro | Martech Zone
Nke a bụ afọ na-atọ ụtọ na teknụzụ ịntanetị. Ọ bụrụ na i lee ya site na ele ụkwụ ụkwụ 10,000, ụmụ mmadụ ka na-enwusi ike n'okporo ụzọ esi eji usoro ọhụụ a, Intanet. Ikekwe o doro anya mana m kwenyere na 2008 bụ n'ezie afọ nke ngwa na usoro na-aga Micro.
Mgbanwe nke webusaiti mmekọrịta (Web 2.0) na-abanye n'ike n'ike na mpaghara ọhụụ, nke ezubere iche. Nnukwu, otu ihe niile ga-agbanwe iji nye gị njikọ ziri ezi na ndị ziri ezi na ọdịnaya ziri ezi… n'oge kwesịrị ekwesị.
Email agafewo ihe eji eme ugbu a maka akwụkwọ akụkọ na ọ na-adịwanye ike na ụwa azụmahịa. Kama inye ya 'ihe omume' nke ozi email na-akpata ugbu a dị ka akụkụ nke usoro ịzụ ahịa ahịa zuru oke iji jigide ndị ọrụ ma mee ka ha jikọta na ntanye ahịa ha, netwọk mmekọrịta ha, blọọgụ ha gụrụ, wdg.
Email na-agbanwe, n'agbanyeghị erughị eru nke mainstream email ahịa. Email na-aga micro… ọzọ adọ ozi, ọzọ akara, na ihe omume chụpụrụ.
Gingde blọgụ gafere Micro na Twitter, Jaiku na Pownce. Ntughari ngwa ngwa nke meputara mkparita uka site na otu rue otutu.
Lọ ọrụ amalitelarị iji Microblogging arụ ọrụ, mana anyị ga-ahụ mkpọsa iji Microblogging na 2008. Anyị ga-ahụkwa otu dị iche iche ka mma na Micro-blogging… dị ka ebe nkata gbanwere na ngwa nkata ọha na eze afọ iri gara aga.
Netwọk mmekọrịta na-esi na usoro monolithic pụọ Facebook, Myspace, LinkedIn na PlaxoMa kwaga na netwọ netwọ micro Ingmụ (dee: obere Indiana, Ụgbọ mmiri, Egwuregwu Ahịa 2.0, IndyLance bụ ole na ole m bidoro ma ọ bụ tinye aka na!).
Ibe edokọbara dị ka Digg na-agbahapụ maka saịtị dị ka Ngwakọta - ebe ị nwere ike ịtọ otu Micro dị iche iche isonyere. Aga m agba onye ọ bụla gụrụ blog m ume ịkpọtụrụ m maka ịkpọ oku na Marketingzụ ahịa Ntaneti ka anyị wee nwee ike ịkekọrịta njikọ. Ngwa ndị ọzọ dị ka Truemors ga-anọgide na-agbapụta na ike ezubere iche nụchara anụcha karịa otu ahọpụtara.
Geographic Information Systems online na-akwụ ụgwọ karịa na ịga micro. Google, Yahoo, na Microsoft gaa n'ihu na-eme ka data mpaghara dịkwuo mma maka nchọta Geographic ka mma. Google na-akwado KML na saịtịmaps, iji choputa ala gi ma tinye aka na webusaiti gi!
Vidiyo na-aga Micro (biputere nkwanye site na okwu Nil na Scobleizer). Ukpo, Ahụhụ na QIK. Teknụzụ vidiyo na ekwentị mkpanaaka na-agbanye, na-enyere ndị mmadụ aka ịdekọ ma bulite vidiyo dị mfe karịa na mma kacha mma!
Sọftụwia dị ka Ngwa Ọrụ ga-anọgide na-arụgide ka ọ bụrụ ihe na-agbanwe agbanwe maka akara na ntinye n'ime ngwa ndị ọzọ ma ọ bụ ụdị ndị ọzọ. Ọ dịghị ihe ọzọ bụ ngwa 'mkpọ' dị mma maka anyị ịzụta na itinye ya, anyị ga-ebugharị teknụzụ CSS iji gbanwee ngwa anyị na gburugburu ebe obibi. Anyị ga-arụrịrị ngwa ndị nwere ike ịmezigharị na obere obere (micro).
N’ebe ahụ ka inwere ya, amụma m maka afọ 2008 - afọ nke atụmatụ micro na ngwa azụmaahịa micro. Ike ike dị ka ndi otu, ihe ndi ozo, ma obu ndi mmadu na-achikota ndi mmadu dika ndi mmadu.
Tags: 2008ntinye akwukwousoro ihe omuma alagismapAhịa 2008Microelekọta mmadụ medianetwọk mmekọrịtasoftware dị ka ọrụ
PageRank: Ejiri Akwụkwọ Ozi Ọchịchị Newton
Dee 27, 2007 na 2: 47 AM
Otu Mixx gị emegheghị ndị debanyere aha gị. M pịa na njikọ gị iji sonyere wee nweta ozi a:
“Chei! Ihe adighi nma.
Pssst: A kpobeghi gi otu a, ya mere mba, igaghi eme ya. Ma jụọ ha nke ọma, ma eleghị anya, ha ga-ekwe ka ị bata. Ma ọ bụ nanị ịmalite otu nke gị! ”
Dee 27, 2007 na 9: 35 AM
O di nwute, Mixx adighi enye 'ndi ozo mepere emepe' (dika m nwere ike igwa!). Ọ bụrụ na ịchọrọ, jiri ụdị kọntaktị m wee zitere m adreesị email gị ma m ga-atụpụrụ gị oku!
Dee 27, 2007 na 5: 49 AM
Na-ada ka 'mediasnacks' gburugburu
Dee 27, 2007 na 10: 33 AM
Ọ bụrụ na ihe niile na-aga micro, na ekwesịrị m ikwenye na ihe ị na-ekwu bụ eziokwu mgbe ahụ dị ka ndị mmadụ n'otu n'otu, anyị ga-abụ akụkụ nke mkparịta ụka pere mpe, dịka ọ bụrụ na ị nọ na nnukwu oriri ma na-agwa mmadụ 5 ma ọ bụ 10 okwu n'abalị niile.
N'ikpeazụ, anyị ga-achọ ezigbo ụzọ iji chọpụta maka ndị otu a dịka onye ọ bụla chọtara banyere Facebook afọ a.
Otu n’ime ezigbo nsogbu ndị m hụrụla ma gbalịa ijide afọ a bụ nnukwu mgbanwe na otu o siri sie ike ịnọgide. Achọpụtala m na m na-amụta banyere teknụzụ ọhụụ site n'aka ndị dị ka Scoble site n'ịgụ faili RSS na onye na-agụ Google m mana ọ dị mfe nnukwu teknụzụ ka atụfuo belụsọ ma onye ọzọ abụghị Arrington na-enyere anyị aka ịnagide ihe anyị ga-ekiri.
Dec 27, 2007 na 12:52 PM
Chei, daalụ nwoke maka aha ya. Onweghi uzo m choro ibelata uru nke post gi mara. You're nọ na ego ọ bụla m tinyere. Ikekwe, ị ga-abụrịrị na ị ga - enwe ike ịza ajụjụ ebe a, ọ bụ ezie na nke ahụ ga - abụ "ịbata" ma eleghị anya. Obi dị m ụtọ ịgụ ọkwa gị n'agbanyeghị. Cheers.
Dec 27, 2007 na 2:52 PM
Enweghị nchekasị, Nil! Brought welitere nnukwu okwu. M gharịrị na vidiyo ruo mgbe m gụrụ okwu gị - na ị bụ eziokwu!
Dec 27, 2007 na 3:46 PM
Otu n'ime ihe na-amasị m mgbe niile na teknụzụ na mgbasa ozi ọhụụ bụ ikike ịkọwa ihe ma mepụta ihe ọhụrụ, ihe na-atọ ụtọ (Ndo, enweghị ike iche maka okwu ka mma karịa nke ahụ ugbu a.) Ma ọtụtụ nke a stof na-ad hoc ruo n'ókè nke na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole maara ihe banyere ịdị adị. Ana m eche echiche banyere ihe dịka hashtags na Twitter. Ka micro a niile nwee mmetụta n'ezie, ọ dị mkpa inwe ụdị ụdị ekwentị ekwentị maka ịgbasa ozi ọma na ndị nkịtị n'ihi - ka anyị chee ya ihu - mmadụ ole na ole mara ihe RSS bụ, hapụ ịdenye aha gaa na ntanetị niile dị mkpa ma yọchaa ha niile.
N'ikpeazụ, esemokwu m bụ na ọtụtụ ohere ịzụ ahịa ndị mmadụ na-ahụ na microblogging na mgbasa ozi mkpanaka na ndị ọzọ niile bụ kpọmkwem ụdị ihe ndị mmadụ dị ka m ga-eme ka ọ pụọ. Anaghị m emegide echiche nke ọ bụla mana ọ ga - - ọ dịkwa oke mkpa - bụrụ ụzọ doro anya, ụzọ dị mfe iji jikwaa ma jikwaa ụdị ahụmiri ahụ dịịrị m. Echere m na oru ngo dịka OAuth na OpenID na-aga ogologo oge iji kwado ụdị ihe a mana echere m na a ka nwere ọtụtụ ọrụ iji chebe ndị mmadụ. Ka ụwa na-aga micro, oghere ndị ahịa na-awakpo na-arịwanye elu nke onwe. Anaghị m eji obi ọjọọ ejiri onwe m wakpo oghere m. Ọ bụrụ na m kpọbata gị, ọ dị mma. Mana mgbe ọ bụla m gwara gị ka ị pụọ, pụọ ma ọ bụ na m ga-apụ gị.
Nke ahụ bụ naanị $ m .02.
Dec 27, 2007 na 5:14 PM
Nke ahụ dịkarịa ala nickel bara uru, Jamie 😉
Echere m na ị kpọgidere ihe abụọ… mbụ na nkà na ụzụ na-agbanwe na evolushọn bụ ihe dị mma. Isi ihe nke abuo i kwuru bu ihe mere anyi ji cho ndi ozo ndi ozo. Ọ bụrụ na enwere m ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ịchọrọ ịmasị, ị ga-enwe obi ụtọ ịchọpụta ya (n'okwu gị) dịka ị kpọbatara m.
Chọta teknụzụ nke na-eweta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na atụmanya nke na-achọ ma ọ bụ mkpa ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ bụ ihe anyị mechara. Ihe ikpeazu m choro ime bu)) tufufu ego m na mgbasa ozi nke erutaghi onye kwesiri ya na b) iwe ndi dika gi site n’itinye ya n’ihu gi mgbe ina achoghi.
Obi dị m ụtọ banyere mgbanwe na teknụzụ nke ga-anọgide na-eweta ọnụ ahịa ahịa! Olile anya anyi adighi akpasu ndi ozo iwe dika gi mgbe anyi choputara ya. 🙂
Dee 28, 2007 na 2: 43 AM
Site na ozi niile dị na weebụ, anyị ga-enyocha ka anyị nwee ike ịghọta ya. Otu n'ime ụzọ kachasị mma iji nyocha bụ niche ma ọ bụ na okwu ndị ọzọ iji mepụta obodo micro ma ọ bụ ụdị ozi ahụ. Ekwenyere m na amụma gị kpamkpam.
Dee 31, 2007 na 5: 11 AM
Daalụ maka post a. Ekwenyere m na Micro nwere ike. N'ihi gịnị? N'ihi na ọ dị mfe ịme. Ndị mmadụ anaghị atụ anya ka ị dee akụkọ kachasị elu yana mbido mara mma, etiti na njedebe. Ma ọ dị mfe iri, ka mma: 'chọgharịa'. Cheers.
Feb 7, 2008 n’elekere 7:36 nke abali
M nọ na-eche ma onye ọ bụla ga-enyere m aka. Ana m achọ nnukwu okwu ugbu a / s na teknụzụ metụtara ahịa suggestions aro ọ bụla ga-enwe ekele dị ukwuu… cheers !!!